नवलपरासीमा ल्यापटप बम ! - Everest Dainik - News from Nepal
नवलपरासीमा ल्यापटप बम !
नवलपुर, फागुन ३० । पूर्वी नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा फेला परेका बमका कारण बिहीबार दिनभर जिल्लाको जनजीवन आतंकित बन्यो। शंकास्पद वस्तुसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ८ वटा बम फेला परेका थिए।
एक ठाउँमा बम आफैं विष्फोट भयो। अन्य ठाउँमा राखेका शंकास्पद वस्तुसहित सबै बम नेपाली सेनाको ‘बम डिस्पोज टोली’ले निस्कृय पारेको थियो। विभिन्न स्थानमा राखेका शंकास्पद वस्तु र बमका कारण दिनभर सुरक्षाकर्मी पनि तनावमा देखिन्थे। त्यसक्रममा फेला परेको ल्यापटप ‘बम’ ले अर्को आतंक सिर्जना गर्‍यो।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत देवचुली नगरपालिका–११ को दलदलेस्थित सडकको कल्भर्ट तल ल्यापटपको ब्याट्रीमा बारुद भरेर विष्फोट गराउन राखिएको भेटियो। उक्त ल्यापटप बमलाई निष्कृय पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक लिलाराज लामिछानेले बताए।
ब्याट्रीमा बारुद भरेर कल्भर्टमुनी राखिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। झोलमा राखेको वस्तु शंकास्पद देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। तत्कालै पुगेको नेपाली सेनाको टोलीले त्यसलाई डिस्पोज गरेको नायब उपरीक्षक लामिछानेले जानकारी दिए।
गैंडाकोट नगरपालिकाको थुम्सीमा रहेको ‘गौली ग्रुपले प्लटिङ’ गरेर राखेको जग्गामा राखिएका ५ वटा बमलाई नेपाली सेनाको टोलीले निस्कृय पारेको छ। कावासोतीको झ्यालटुङ डाँडास्थित नेपाली सेनाको कृष्ण दल गणको टोलीले बम निष्कृय पारेको हो। दिउँसो २ वटा सुतली र ३ वटा पेट्रोल बम प्रहरीले निष्कृय पारेको थियो।
यसअघि सोही स्थान नजिक रहेको जय श्री पुलमा राखिएको शंकास्पद वस्तु सुरक्षाकर्मीले हटाएका थिए। बोराभित्र राखिएको उक्त वस्तुमा खाली टिन र ब्याट्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै कावासोतीस्थित डिभिजन वन कार्यालय नजिक राखेको बम दिउँसो विस्फोट भएको थियो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली नपुग्दै बम विष्फोट भएको हो। विस्फोटमा कुनै मानवीय र भौतिक क्षति नभएको नायब उपरीक्षक लामिछानेले बताए।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा विप्लव समूहले बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेका कारण सबै घटना उक्त समूहले गराएको प्रहरीको शंका छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
ट्याग्स: laptop bom